Dhageyso: Maamulka Somaliland Oo Sheegtay In Ay U Diyaar Garoobeen – Kismaayo24 News Agency
Dhageyso: Maamulka Somaliland Oo Sheegtay In Ay U Diyaar Garoobeen
by admin 6th December 2019 6th December 2019 0187
Wasiirka deegaanka maamulka Somaliland marwo Shukri Ismaaciil Baanddare ayaa ka hadashay roobabka dabaylaha iyo duufaanada wata ee la saadaaliyay in ay ku dhufanayaan deegaanada xeebta ah ee Soomaaliya.
Waxa ay sheegtay in maalmahaan ay la socdeen wararka sheegaya in ay jirto saadaalintaa ku aaddan Puntland ilaa Somaliland in ay ku dhufan karto duufaantaas hase’ahaatee ay muujiyeen diyaar garoow aad u balaran isla markaana ay feejignaan ku jiraan.
Wasiirka deegaanka maamulka Somaliland marwo Shukri Ismaaciil Baanddare ayaa sheegtay in aysan aheyn markii ugu horeysay oo duufaan ay ku dhufato deegaanada Somaliland hase’ahate ay soo martay duufaantii Saqar aadna ay ula tacaaleen waxyeeladi ka dhalatay.
Ugu dambeyntii waxa uu sheegtay in dadka deegaanka ay ku wargeliyeen in ay iska guuraan dhulka Xeebta ah ee saadaalinta laga bixiyay taas oo qeyb ka ah diyar garoowga Somaliland sida ay hadalka u dhigtay.
Baadiyow: Waa laga fiican yahay in qof Muslim ah la gaaleysiiyo Diintana ay is xijiyaan shakhasiyaad
wararkii ugu danbeeyey Waa sidee xaalada degaanadii shalay lagu dagaalamay ee duleedka Gaalkacyo?
Wasiir Saacado ” Ciidankii ka dagaalamay Gaalkacyo waxay ahaayeen kuwo lagu soo tababaray Muqdisho oo sita Astaantii Qaranka Soomaaliyeed”